ခေတ်စနစ်၏ ဖြစ်တည်ရာ … | ကျွန်မ၏ခံစားမှုများ သီကုံးရာ လွတ်လပ်ခြင်းအနုပညာ
July 15, 2008, 6:34 am Filed under: My Opinion မနက်ခင်း နေရောင်ခြည်နုနုက တဖြေးဖြေး ရပ်စဲသွားသော မိုးစက်မိုးပေါက်များကြားမှ လူးလွန့်စွာ နိုးထအသက်ဝင်လာသည် .. ။ ကားလမ်းမနှင့်နီးသော ကျွန်မ အိမ်ခန်းလေးမှကြည့်လိုက်လျင် အသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာသော မြို့တစ်မြို့ထဲမှာ အလုပ်မှလာကြိုသောကားများ ၊ အလုပ်သွားနေသော ကားများ ၊ ကျောင်းသား ကျောင်းသူများဖြင့် နိုးထလာသော နေ့သစ်တစ်ရက်ကို ကိုယ်စီတာဝန်များဖြင့် လှုပ်ရှားပုံဖော်သွားလာနေကြသည် .. ။ တစ်ဖက်ခန်းမှ ကျောင်းသွားရန် နိုးထလာသော ညီမလေးများအသံကို နားစွင့်ရင်း သူတို့အားလုံးအတွက် အဆင်သင့်ပြင်ဆင်ပြီးထားသောကြောင့် တခြားအလုပ်များကိုသာ စဉ်းစားခန်းဖွင့်နေမိသည် .. ။
မတိုးမကျယ် စိတ်ပူခြင်းလေသံစွက်ဖက်နေသော မေမေ့အသံကို ကျွန်မ ကြားလိုက်ရင်း ညီမငယ်လေးအခန်းသို့ ကျွန်မ ၀င်သွားလိုက်သည် .. ။အဖျားရှိန်မြင့်နေသော ညီမငယ်လေးကိုကြည့်ရင်း စိတ်ပူမိကာ `ဆေးခန်းသွားပို့ရမယ်´ဟု မေမေ့ကို လှည့်ကာပြောလိုက်သည် .. ။ ရုတ်တရက် ညီမလေးက
လာလယ်သွား ပါတယ် ။ ဒီလို ရသလေးတွေရေးပါဦး နော် အမ
July 15, 2008 @ 8:30 am Reply	Hi, ma lin latt this is very valuable essay of u. i really agree with u and i also have same feelings like u.
Comment by moe thandar
July 17, 2008 @ 1:32 am Reply	That’s totally right, sis. Keep yourself up in that great living art. Yeah, it’s artistic writing style too.
July 17, 2008 @ 10:26 am Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI